ယာရိုစလဗာလ်မြို့ (ရုရှား: Яросла́вль, IPA: [jɪrɐˈslavlʲ]) သည် ရုရှားနိုင်ငံ၊ ယာရိုစလဗ် ဒေသကြီး၏ အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော် ဖြစ်ပြီး မော်စကိုမြို့မှ ၂၅၀ ကီလိုမီတာ (၁၆၀ မိုင်)ကွာဝေးသည်။ ယာရိုစလဗ်မြို့သည် သမိုင်းဝင်မြို့တစ်တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခံရသော မြို့ဖြစ်ကာ ဗော်လ်ဂါမြစ်နှင့် ကိုတာရာစ်မြစ် ဆုံရာတွင် တည်ရှိသည်။ ယာရိုစလဗာလ်မြို့သည် မော်စကိုမြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက်အရပ်ရှိ သမိုင်းဝင် ဒေသများကို စုစည်း၍အုပ်စုဖွဲ့ထားသော ရွှေရောင်အဝန်းအတွင်း ပါဝင်သော မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်သည်။ လူဦးရေ: ၅၉၁,၄၈၆ (၂၀၁၀ သန်းခေါင်စာရင်းအရ)
၁၃ ရာစုနှင့် ၁၄ ရာစုအတွင်းတွင် ယာရိုစလဗာလ်မြို့အား သစ်များဖြင့် အများဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့ရာ ထိုရလဒ်အဖြစ် မကြာခဏ မီးအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းသည့် ကပ်ဘေးဆိုက်ခဲ့ရာ တခါတရံတွင် တမြို့လုံး လောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။ (ဥပမာအားဖြင့် ၁၂၂၁ ခု ဗဆဲဗာလော့ဒ် အာဏာလွဲပြောင်းယူမှုမတိုင်မီ လောင်ကျွမ်းခဲ့သောမီး) နောက်ထပ် မြို့ကိုသာမ ရုရှားမင်းသားတို့အတွက်ပါ အန္တရာယ်ကျစေခဲ့သော အကြောင်းအရင်းမှာ အရှေ့အရပ်မှ လာသော လူမျိုးခြားကျူးကျော်သူများ ဖြစ်သည်။(များသောအားဖြင့် မွန်ဂိုတပ်များ (Mongol Horde)) ၁၂၅၇ ခုနှစ်တွင် သိသိသာသာ တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြပြီး Möngke Khan လက်အောက်မှ ရွှေရောင်လူစုများ(တပ်များ) (Golden Horde) သည် ယာရိုစလဗာလ်နယ်မြေအား လျင်မြန်စွာ တပ်ဖြန့်နိုင်ပြီး လူများစွာရှိသော နေရာများနှင့် မင်းသားမိသားစုဝင်များကို သတ်ဖြတ်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ဆိုးများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ကိုတာရာစ်မြစ် ညာဘက်ကမ်းပါးတွင် ယခုအခါ အောက်မေ့ဘွယ်ဘုရားကျောင်းနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင် တည်ရှိနေသည်။
ယာရိုစလဗာလ်မြို့တည်ထောင်သူ အောက်မေ့ဖွယ်ရုပ်တုနှင့် မြို့တော်တံဆိပ်ကို ၁၀၀၀ ရူဘယ်တန် ငွေစက္ကူ၏ ရှေ့မျက်နှာစာတွင် ရေးဆွဲထားပုံ.
ပထမဆုံး ယာရိုစလဗာလ်မြို့တံဆိပ်ကို ဩဂုတ်လ ၃၁ ၁၇၇၈ ခုနှစ်တွင် တရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တုန်းက အမှတ်တံဆိပ်သည် ငွေရောင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဝက်ဝံအရုပ်ကို ထားရှိကာ သူ၏ ဝဲဘက်ရှေ့လက်တွင် ရွှေရောင်ပုဆိန်သွားတပ် လှံရှည်ကို ကိုင်ထားသည့်ပုံဖြစ်သည်။ ၁၈၅၆ ခုနှစ်တွင် တံဆိပ်ကို အနည်းငယ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ မူလရိုးရာအတိုင်း ပုဆိန်သွားတပ် လှံရှည်ကိုင် ဝက်ဝံပုံကို မပြောင်းလဲပဲ နဂိုမူလအတိုင်းထားရှိကာ ဒိုင်းပုံသဏ္ဌာန်တံဆိပ်၏ ထိပ်တွင် ဧကရာဇ်၏ သရဖူကို ထားရှိခဲ့သည်။ ဖြည်စွက်ပြုလုပ်ခြင်းတွင် ဒိုင်းပုံသဏ္ဌာန်တံဆိပ်၏ ပတ်လည်တွင် ရွှေရောင်ဝက်သစ်ချပင်အရွက်များ ထားရှိကာ ထိုအရွက်များအား စိန့်အန်ဒရဲရာဘွဲ့တံဆိပ်ဖြစ်သော အပြာရောင်ဖဲကြိုးဖြင့် ရစ်ပတ်ထားသော ပုံများပါဝင်သည်။ အဆိုပါပုံစံအမှတ်တံဆိပ်သည် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိခဲ့သည်မှာ ၁၉၁၈ ခုနှစ်ထိတိုင်ဖြစ်သည်။ ထိုနောက်ပိုင်းတွင် အောက်တိုဘာတော်လှန်ရေး အောင်မြင်သောကြောင့် ဘောရှီဗစ်ပါတီ အာဏာရလာခဲ့သည်။ ထိုအခါ ဇာဘုရင်များ၏ ဒေသနှင့်နယ်မြေဆိုင်ရာ သင်္ကေတ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ ဖျက်သိမ်းပြီး ယာရိုစလဗာလ်မြို့တွင် ဆိုဗီယက် အုပ်ချုပ်မှုများ အသက်ဝင်လာခဲ့ရာ မြို့သည် မည်သည့် တရားဝင်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်မျှ မရရှိခဲ့ပေ။ ၂၀ ရာစုအဆုံးထိ မြို့သည် ထိုအခြေအနေနှင့်ပင် ရှိနေခဲ့သည်။ တတိယမြောက်နှင့် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော မြို့တံဆိပ်ကို မြူနီစီပယ်ကောင်စီမှ ၁၉၉၅ ဩဂုတ် ၂၃ ရက်တွင် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ တံဆိပ်၏ အရောင်နှင့် ပုံစံမှာ ၁၈၅၆ ခုနှစ်မှကဲ့သို့ ယူခဲ့သည်။ သို့သော် တံဆိပ်ပတ်လည်ရှိ ဝက်သစ်ချသစ်ခတ်နှင့် စိန့်အန်ဒရဲရာတံဆိပ်ကို ဖြုတ်ခဲ့သည်။ ထို့တိုင် ပြောင်းလဲသည် မပြည့်စုံသေး။ ယခင်တံဆိပ်၏ ထိပ်ပိုင်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဧကရာဇ်၏ သရဖူနေရာတွင် မာနာမခါဦးထုပ်ကို လက်ရှိတံဆိပ်တွင် အစားထိုးခဲ့သည်။ ထိုဦးထုပ်သည် ရုရှားနိုင်ငံ၏ သက်ဦးဆံပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တခြားအဓိပ္ပာယ်အရ ရုရှားပြည်နယ်များ၏ အင်အားကြီးမားမှုကို ကိုယ်စားပြုသော အမှတ်အသားဖြစ်သည်။
ရုရှားပြည်တွင်းစစ် အကျိုးဆက်များနှင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း လေကြောင်းစီးနင်းမှုများ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ခံစားခဲ့ရသော်လည်း ယာရိုစလဗာလ်မြို့သည် ၁၇ ရာစု၊ ၁၈ ရာစု၊ ၁၉ ရာစုမှ မြို့ပြ အဆောက်အဦးများကို ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ ဒါတွေဟာ မြို့ကို ဗိသုကာ လက်ရာများ အဆင့်ဆင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုနှင့် ရုရှားဇာဘုရင်ခေတ်လက်ရာများရှိသော သမိုင်းဝင်နေရာအဖြစ် မြို့ကို အမှတ်ရစေခဲ့သည်။ မြို့လယ်ရှိ ၆၀၀ ဟက်တာလောက်ဖုံးလွှမ်းထားသော ဧရိယာတွင် ဖက်ဒရယ်မှုအရ ကာကွယ်ပေးထားသော ဗိသုကာသမိုင်းဝင်နေရာ ၁၄၀ လောက်ရှိသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် စပါဆာ-ပရီရာဘရာရှန်းစကီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတလျှောက် အဆောက်အဦများကို ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာစာရင်းသို့ ထည့်သွင်းခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ထိုအဆောက်အဦများအပြင် မြို့လယ်ပြင်ပတွင် ဗိသုကာလက်ရာမွန်အဆောက်အဦ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိသေးသည်။
ယာရိုစလဗာလ်မြို့တွင် ဖော်ပြပါ အဆင့်မြှင့် ပညာရေးအဆောက်အအုံများတည်ရှိသည် __ ယာရိုစလဗာလ်တက္ကသိုလ် (သို့) ယာရိုစလဗာလ် ဒမီဒေါ့ဖ် တက္ကသိုလ် (ရုရှား: Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова)၊ ယာရိုစလဗာလ်နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရုရှား: Ярославский государственный технический университет)၊ ယာရိုစလဗာလ် ပညာရေးတက္ကသိုလ်(ရုရှား: Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского)၊ ယာရိုစလဗာလ် ဆေးတက္ကသိုလ်(ရုရှား: Ярославский государственный медицинский университет)၊ ယာရိုစလဗာလ် စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၊ တပ်မတော် စာရင်းအင်းနှင့် စီးပွားရေးကျောင်း၊ ယာရိုစလဗာလ် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးကျောင်း တို့ဖြစ်သည်။ အစိုးရမဟုတ်သော ကျောင်းများအနေဖြင့် International Academy for Business and New Technologies (MUBiNT) နှင့် မော်စကို အခြေပြု တက္ကသိုလ် ကျောင်းခွဲများ တည်ရှိသည်။ ထို့ပြင် အော်သိုဒေါ့ ဘုန်းတော်ကြီးများ မွေးထုတ်ပေးရာ Yaroslavl Seminary ကျောင်းလည်း တည်ရှိနေသည်။
↑ Russian Federal State Statistics Service (2011). "Всероссийская перепись населения 2010 года. Том 1" [2010 All-Russian Population Census, vol. 1] Archived 16 March 2013 at WebCite. Всероссийская перепись населения 2010 года (2010 All-Russia Population Census) (ရုရှားဘာသာဖြင့်).
↑ Climate Table for Yaroslavl။ 16 November 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ gorodyaroslavl.ru Archived 1 October 2016 at the Wayback Machine.. gorodyaroslavl.ru.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယာရိုစလဗာလ်မြို့&oldid=742535" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၀:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။